भीम घिमिरेका लेखहरु :
रोग रोक्ने संवेदनालाई भोकले छुन्छ ?
आइतबार बिहान कोटेश्वरबाट एकजना भाइले फोन गर्नुभयो- 'मेरो छेउका एउटा परिवार सर्लाही जान निस्किए । ससाना बच्चा र लेडिज पनि छन् । पैदलै कसरी घर पुग्लान् ? नरमाइलो लागिरहेको छ ।' उनको भनाइले मलाइ पनि नरमाइलो लाग्यो ।